Xukuumadda Somaliland Oo Iska Fogeysay inay ku lug leedahay khilaafka xisbiga UCID | Somaliland.Org
July 31, 2011	“Guddoomiyaha UCID waxaanu ugu yeedhaynaa inaanu eedaasi kula soo galgalinin xukuumadda oo uu isagu odaynimo ku dhameeyo khilaafkaasi”
“Waxaanu ugu yeedhaynaa Guddoomiyaha inuu dadka uu ka daayo dhawaaqyada dhiiladda ah”
Hargeysa (Somaliland.Org)-Xukuumadda Somaliland ayaa si adag iskaga fogaysay eedo ka soo yeedhayay Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo ku eedeeyay inay ku lug leedahay khilaafka labada garab u kala jabiyay xisbigiisii.
Xukuumadu waxay sheegtay in ay jeceshay in xisbiga UCID khilaafkiisa ku dhamaysto wada hadal oo ay ixtiraamaan shuruucdooda, hase yeeshee aanay khilaafkoda kula soo galgalan xukuumada.
Sidaasi waxa maanta kaga dhawaaqay shir jaraa’id oo uu ku qabtay xarunta Madaxtooyada Afhayeenka Madaxtooyada Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, waxaanu sheegay in dhinac ka mid ah labada garab ee xisbiga UCID ay wax ka abaabuleen rabshadihii Sabtidii ka dhacay magaalada Hargeysa.
“Waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo xukuumadda Somaliland waxay qaranka u haysaa xilkii ummaddu u igmatay ee dastuuriga ah waxay haysaa xilkii ummaddu sida tooska ah ee ay ugu igmadeen inay Hoggaamiso qaranimada Somaliland dhinac walba oo ah inay ilaaliso, shuruucda, nabadgelyada, nolosha iyo inay ilaaliso inta xukuumad xilkeedu yahay oo dhan,”ayuu yidhi Afhayeenku.
Afhayeenka Madaxtooyaddu waxa uu sheegay in masuuliyiinta UCID looga baahan yahay inay isu tanaasulaan haddii kalena ay isla tagaan Ha’yadaha garsoorka waxaanu yidhi “Xisbiga UCID-na waxa uu ka mid yahay sadexda xisbi qaran ee dastuurka ku dhisan waa xisbi qaran waxa inoola mid yahay xisbiyada kale ee KULMIYE iyo UCID.dimuqraadiyada ayay dabeecadaheeda ka mid tahay muranka, is qabadka kooxaha, qofafka ama ashkhaasta xisbiga wadaagaa ay isku qabtaan laakiin waxa loo baahan yahay in xisbigu iyagoo ixtiraamaya nabadgelyada iyo shuruucda dalku uu leeyahay iyagoo ixtiraamaya shuruucda ay dhexdooda leeyihiin. Dalkeenu dhaqan buu lahaa marka dhinacyadu is qabtaan waa inay isu soo tanaasulaan. Haddii taasi suurto gal u noqon waydo markaa waxay tahay isula tagaan Ha’yadaha sharciga.”
Mr. Cukuse waxa uu garabka Faysal Cali Waraabe ku eedeeyay abaabulkii taageereyaashii Sabtidii rabashadaha ka sameeyay magaalada waxaanu yidhi “Waxaan ka xumahay in dhinacyadii isku qabtay arrinka xisbiga UCID gudahiisa ay arrintoodu gaadho dadweynaha oo waliba dhinac ka mid ahi uu noqdo mid lug ku leh abaabulkaasi dabadeedna dhalinyaraddu ay rabshado gacan ka hadal wata ay ka sameeyeen meelaha qaarkood.”
Afhayeenka oo ka hadlayay mowqifka xukuumadda ee ku wajahan khilaafka UCID “Xukuumadda Somaliland mowqifkeeda ku aadan khilaafka xisbiga UCID waxa weeye xisbigaasi waxaanu la jecelahay inuu noqdo xisbi jira, waxaanu la jecelahay dadka uu mideeyaa inay si walaalnimo ah oo dhaqanka Somaliland ahayd ku kala baxaan oo is ixtiraamaan isuna tanaasulaan is ixtiraamaan oo ay xeerarkooda ku kala baxaan, haddii iyagu ay kala bixi waayaana ay Ha’yadaha Garsoorka inay u tagaan. Waxaanu qabnaa in khilaafka xisbiga UCID iyo khilaaf xisbi kale-toona aanu waxba u dhimi Karin nabadgelyada dalka,”ayuu yidhi Afhayeenku.
Waxaanu intaasi ku daray “Ninka ku eedaynaya ee leh xukuumadda ayaa lug ku leh oo kala saari wayday waxaanu leenahay xukuumaddu wax lug ah kuma laha oo aan ka ahayn inay ammniga sugayso marka loo baahdo ee nabadgelyo darro timaado. Marka kalena waxa shaqadaasi leh Ha’yadaha garsoorka. Waxaanu Guddoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe waxaanu ugu yeedhaynaa inaanu eedaasi oo kale kula soo galgalinin xukuumadda oo uu isagu odaynimo ku dayo inuu xisbiga dhexdiisa ku dhameeyo arrintaasi, dadkana uu ka daayo dhawaaqyada dhiiladda ah ee sababi kara nabadgelyo darrada.”
Afhayeenku waxa uu dadweynaha u soo jeediyay inay nabadgelyada dalka ilaashadaan oo aanay axsaabta qaranka iyo ururada siyaasadda ee la furayaaba aanay noqon dhufaysyo la isu soo gelayo.
Previous Postgarabka isbedel doonka UCID oo dacwad u gudbiyay maxkamada sare iyo Gudida DoorashooyinkaNext PostBadhasaabka Sool oo ka hadlay sadex qof oo dilalka ka fulin jiray Laascaanood oo la qabtay	Blog